Bogga ugu weyn Goobaha Xorta ah ee Tartanka Hoose ee Si Fiican kuu Siin kara 15
Wixii a xoreeye cusub, shabakadaha ugu fiican ee ay tahay inaad ku biirto si aad u bilowdo kasbashada isla markiiba waa inay ahaadaan goobo madaxbanaan oo leh tartan hoose.
Tusaale ahaan, bogagga sida Upwork waxay leeyihiin tiro badan oo madax -bannaan, aad bayna u adag tahay in shaqo laga helo masraxa. In kasta oo ay tahay mid ka mid ah mareegaha ugu madax -bannaan ee ugu wanaagsan adduunka, haddana hubaal maahan kuwa bilowga ah.
Sidaa darteed, waxaa habboon in laga diiwaan geliyo goobo xor ah oo leh tartan yar.
Tani waa talo wanaagsan maxaa yeelay boggaga sida UpWork ayaa cadaadis kugu saaray inaad la tartanto shaqaalaha kale ee madaxa -bannaan oo aad hoos u dhigto qiimahaaga si aad shaqooyin ugu guuleysato.
Sida laga yaabo inaad ka warqabto, ku -biiridda shabakad cusub oo madax -bannaan waxay ku siin doontaa faa'iidooyin badan.
Marka, eeg liiska hoose si aad u ogaato haddii aad heli karto meel wanaagsan oo aad ku xayeysiiso adeegyadaada.
Liiskan adiga ayaa loogu talagalay haddii aad tahay qof madax -bannaan oo raadinaya goob cusub oo lagu suuqgeeyo adeegyadaada, ama haddii aad hadda bilawday bilow ahaan.
Waxaan gacanta ku soo qaatay dhowr goobood oo iskii u shaqeysta oo kuu sahli kara inaad bilowdo.
Goobahan xorta ah ee xorta ah ee dhowaan la bilaabay waxay leeyihiin tartan hoose waxayna kuu oggolaan doonaan inaad magac u samaysato adigoon ku tartamin qiime jaban.
Waxyaabaha soo socdaa waa qaar ka mid ah mareegaha xorta ah ee ugu fiican oo leh tartan hoose oo si tartiib tartiib ah u kacaya si ay u noqdaan barxad weyn oo warshadaha ah.
Liisaska Goobaha Xorta ah ee Tartanka Hoose ee 15 oo Si Fiican kuu Siin kara 2022
#1. Xawaaraha dheereeya
Speedlancer waa barxad madax-bannaan oo dhulka hoostiisa jabisa oo xoojisa awoodda dadka si ay u dhammaystirto howlahaaga si ka dhaqso badan sidii hore!
Sababtoo ah kobaca deg -degga ah ee caanka ah, Speedlancer ayaa mudan in la xuso.
Blog -kan ayaa sidoo kale u heellan inuu soo bandhigo kaliya kuwa ugu fiican, ama kuwa ugu sarreeya, kuwa madaxbanaan. Waxaa jira shaqaalayaal badan oo khibrad leh oo aad ku tiirsanaan karto.
Goobta iibinta muhiimka ah ee goobtan ayaa u muuqata inay shaqooyinka ku dhammaysanayaan wax ka yar 4 saacadood.
Faa'iidada kaliya ayaa ah 20% lacag madal. Kaas oo aad ugu dhow UpWork.
Si kastaba ha ahaatee, shaqo ka helidda goobtan iskii u shaqaysta waa mid fudud marka loo eego tartan hoose.
Isku qor Halkan
CareerGig wuxuu ku xiraa shaqaalaha madaxa -bannaan ganacsiyada doonaya inay shaqaalaysiiyaan 1099 qandaraasleyaal aqoon sare leh, iyo sidoo kale inay siiyaan shaqaalaha madaxa bannaan ilkaha, hawlgabka, iyo faa'iidooyinka kale.
In kasta oo xaqiiqda ah in magaca goobtan ay ku jirto erayga “gig,” haddana ma aha madal Fiverr u eg.
Loo-shaqeeyayaasha cusub, goobtan cusub ee madax-bannaanida waxay leedahay shaqo badan oo lacag badan leh. Waxay u taagan tahay mid ka mid ah goobaha xorta ah ee ugu wanaagsan tartanka hooseeya.
Shaqooyinka waxaa laga heli karaa dhinacyo kala duwan, oo ay ku jiraan suuqgeynta, xisaabinta, falanqeeyayaasha xogta, tababarka, iyo wax kaloo badan.
Haddii aad ku cusub tahay madaxbannaanida oo aad shaqo raadinayso, Suuqa Hal-ee-Nooca ah ee Qorayaasha Madaxa Bannaan waa meesha la joogo. Meel aad ka shaqaaleysiin karto qoraayaal iskood u shaqeysta ama lacag ku kasban kara qoraal ahaan.
Ku biir beeshan qoraayaasha madaxa -bannaan si aad u hesho adeegyo aan dhammaad lahayn oo lacag -bixinno ah, iyo sidoo kale lacag -bixinno fudud iyo nidaam lacag -bixin oo cad.
Tan ugu muhiimsan, looma baahna qorayaasha inay abuuraan app cusub. Waxay curiyaan oo abuuraan iyagoo adeegsanaya CMS-ka ku dhisan (Nidaamka Maaraynta Maaddada).
In kasta oo cusub, madalkani waa sahlan yahay in lagu socdo oo dabacsani. Waa mid ka mid ah goobaha xorta ah ee ugu wanaagsan adduunka oo tartankiisu hooseeyo.
Contena waa guddi shaqo oo madaxbanaan oo si gaar ah loogu talagalay qorayaasha. Waxay ku lug leedahay shaqooyinka qorista ee dib loo eego maalin kasta.
Sanadihii la soo dhaafay, Contena® waxay ka caawisay kumanaan qof inay ku bilaabaan qoritaanka iskood u shaqeysta.
Websaydhkan, waxaad ku ogaan kartaa shaqooyinka ugu wanaagsan oo aad isla markiiba ku shaqaalaysiin kartaa si aad u shaqaysato.
Boosas nuqullo kala duwan ayaa lagu daray, oo ay ku jiraan wax kasta oo ka yimid qorista blog -ka ilaa qorista buugga, qorista dib -u -bilaabista, iyo inbadan.
Waxaad si fudud u codsan kartaa shaqooyinkan qorista ka dib markaad dhammaystirto diiwaangelin deg -deg ah oo aanad ku lug yeelan wax dagaallo dalab ah.
Contena waxay u taagan tahay mid ka mid ah goobaha xorta ah ee tartanka xorta ah.
CloudPeeps waa beel, suuq iyo goob madax -bannaan oo loogu talagalay shaqaalaha madaxbanaan ee cusub oo tartankoodu hooseeyo.
Rasmi ahaan, CloudPeeps waa madal madaxbanaan oo bixisa adeegyo kala duwan, oo ay ku jiraan suuqgeynta, maamulayaasha warbaahinta bulshada, khubarada SEO, horumariyayaal, naqshadeeyayaal, iyo inbadan.
In kasta oo aan sidaa loo jeclayn, waxay u adeegtay in ka badan 20,000 oo macaamiil dalal kala duwan.
Adigoo ah qof weyn, waxaad fursad fiican u yeelan doontaa inaad shaqooyin ka soo degto madalkan maxaa yeelay waxay leedahay saldhig adeegsade xaddidan iyo xirfadlayaal.
Mushaharkeeda waa u qalantaa. Sii talaal.
FreeUp waa suuqa xorta ah halkaas oo nashqadeeyayaasha nuxurka, soosaarayaasha webka, taageerada software, khubarada iibka iyo suuqgeynta, iyo sidoo kale xisaabinta, tarjumaadda, iyo shaqooyinka maamulka laga heli karo.
Waa suuqa xorta ah ee casriga ah oo kaliya u oggolaanaya shaqaalaha madaxa -bannaan ee ka gudbay marxaladda baaritaanka.
Tani waxay madasha ka ilaalisaa wariyeyaasha aan khibrada lahayn iyo kuwa jaban.
Sidaas darteed, uma baahnid inaad gasho dagaalo dalab si aad shaqo uga hesho madalkan. Halkii, waxaa laguu magdhabi doonaa kartidaada iyo khibradaada.
Mid ka mid ah xaqiiqda xiisaha leh ee ku saabsan madalkan ayaa ah in guddigu uu bixiyo loo -shaqeeyaha ee uusan ahayn madax -bannaane.
Haddii aad ku cusub tahay xornimada xorta ah, madalkani waa mid ka mid ah goobaha xorta ah ee ugu wanaagsan tartanka yar.
Rev waa degel internet -ka bixiya adeeg -bixiyeyaal iyo adeegyo qoraal -qoris iyo YouTubers ah.
Hadafka Rev waa in loo fududeeyo dadka inay ka shaqeeyaan guriga.
Sidaa darteed, hadda waad dalban kartaa inaad ka shaqeyso sidii Qoraa -qoraalka, Qoraalka, ama Turjumaanka guriga oo aad lacag ka kasbato.
Haddii aad ku fiican tahay dhageysiga maqalka iyo u turjumidda qoraalka, madalkani waa meel fiican oo laga bilaabo haddii aad rabto inaad ka shaqayso qoraalka qoraalka.
Maadaama ay tahay goob madaxbanaan oo cusub, waxay leedahay tartan aad u hooseeya.
Zeerk waa suuqa xorta ah ee shan jirka ah oo si joogto ah ugu sii fidaya shaqaale madaxbanaan maalin kasta.
Meel aad ka kasban karto $ 4 illaa $ 200 adoo samaynaya shaqooyin yaryar & adeegyo madax -bannaan.
Dhanka kale, goobtu waxay leedahay nidaam kuu oggolaanaya inaad ku dallacdo adeegyadaada inta u dhexaysa $ 5 iyo $ 500 adeegyadaaga.
Waad iska qori kartaa oo bilaabi kartaa iibinta lacag la'aan, laakiin Zeerk waxay ku qaadan doontaa boqolkiiba 8 illaa 20% iib kasta oo adiga lagaa helo
Sababtoo ah adeegiisa gaarka ah waxay leedahay tartan aad u hooseeya. Dhab ahaantii, ma jirto goob madaxbanaan oo la barbar dhigi karo Zeerk.
Workana waa websaydh kugu xira macaamiisha raadinaya inay shaqaaleeyaan shaqaale madaxbanaan dhinacyo kala duwan si ay uga caawiyaan inay ballaariyaan shirkadahooda.
Waa degel isku xira shaqaalayaasha Laatiin Ameerika.
Toddobaad kasta, Workana waxay boqolaal meelood oo cusub ka heshaa macmiisha raadinaya shaqaale madaxbanaan.
Xaqiiqdii waa inaad ku jirtaa liiskan haddii aad tahay qof madax bannaan oo Isbaanish ah. Sidoo kale, iyada oo ah goob madaxbanaan oo cusub, waxay leedahay tartan aad u hooseeya.
Sou an so tart si fog iyo madaxbannaan u shaqaynaya maanta. Kaliya abuuro astaantaada oo u soo dir soo jeedimaha mashaariicda. Waa bilaash!
#10. Adeegga Baxsiga
ServiceScape waa suuq xor ah oo weli si xawli ah u sii fidaya oo ku takhasusay daabacaadda, tarjumaadda, tafatirka, iyo naqshadeynta garaafka.
Waxay hadda leedahay in ka badan 80K macaamiil diiwaangashan, kuwaas oo badankoodu yihiin meherado caan ah.
Qorayaasha iyo naqshadeeyayaasha qibrada leh ee khibrada leh, meeshan ayaa ku habboon. Si kastaba ha ahaatee, shaqaalaha madaxa -bannaan ee cusub ayaa si fudud uga heli kara shaqooyin madalkan laga bilaabo maalinta koowaad ee diiwaangelinta.
Shaqooyinka laga heli karo madalkan ayaa ah kuwo ku filan in la dejiyo dhammaan xubnaha diiwaangashan.
Si kastaba ha ahaatee, si aad iskaga diiwaangeliso shabakadda, waa inaad buuxisaa foomka diiwaangelinta oo dheer.
Outsourcely waa madal cusub oo iskii u shaqeysta oo siisa sifooyin iyo ikhtiyaarro aad u weyn shaqaalaha xorta ah.
Laga soo bilaabo waaweyn ilaa bilowga yar, shaqaalaha fog waxay ka helayaan shaqo waqti-dheer oo la isku halleyn karo warshad kasta iyo baaxadda shirkadda.
Dibedda ayaa gabi ahaanba xor u ah isticmaalka, waxayna kuu oggolaaneysaa inaad haysato 100% dakhligaaga.
Ma jiraan khidmado madal. Loo -shaqeeyayaasha ayaa ah kuwa kaliya ee bixiya lacag si ay u isticmaalaan mareegaha.
Hase yeeshee, waxay u taagan tahay mid ka mid ah goobaha ugu fiican ee freelancing ee leh tartan hoose. Sababtoo ah keega qaranka (shaqooyinka) ayaa ku filan in la helo qof kasta oo madax-bannaan oo ku yaal goobta.
Twine waa madal sheeko-furan oo il furan oo kuu oggolaanaysa inaad abuurto sheekooyin dhex-dhexaad ah, oo aan toos ahayn.
Twine waxay si toos ah ugu daabacdaa HTML, sidaa darteed shaqadaada meel walba waa la wadaagi karaa.
Waxaad xor u tahay inaad u isticmaasho wax kasta oo aad ku samayso sidaad doonto, xitaa ujeeddooyin ganacsi.
Waa shabakad madax -bannaan oo cusub oo si xawli ah u sii kordheysa oo hadda leh in ka badan 175,000 oo madax -bannaan oo ka shaqeeya naqshadeynta, muusigga, iyo warshadaha filimada.
Naqshadayaasha sawirrada, sawir qaadayaasha, fannaaniinta, filim sameeyayaasha, naqshadeeyayaasha ciyaarta, iyo xirfadlayaal kale oo hal -abuur leh ayaa adeegsan kara madalkan.
goLance waa degel casri ah oo madaxbanaan oo si aamusnaan leh caan ku ah.
Aasaasaha goobta iyo maamulaha ayaa leh aragti mustaqbalka goobta oo aad u dhiirigelinaysa. Waqtigan xaadirka ah, goobta ayaa ku dhufatay bartilmaameedka weli goobtan freelancing ayaa weli ah mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee leh tartan hoose.
Waxa xiisaha lihi, goLance waa suuqa ugu madax bannaan ee internetka ugu dabacsan oo leh khidmadaha adeegyada ugu hooseeya, tartan hooseeya, iyo ikhtiyaarrada lacag bixinta ugu dhaqsaha badan
Haddii aad shaqo ka raadinayso suuqgeyn, barnaamij, ama horumarinta webka, madalkan cusub wuxuu heli doonaa fursado badan.
Intaa waxaa dheer, goLance waxay leedahay khidmad madal oo kaliya 10%.
Shaqaalaynta waxaa adeegsada ururada sida Zappos, AlJazeera, iyo Forbes si ay u helaan shaqaale madaxbanaan.
Haddii aad tahay xirfadle madax -bannaan, waxaad ka heli doontaa goobtan mid aad waxtar u leh.
Sidoo kale ma codsanaysid shaqo aan kala sooc lahayn websaydhkan. Shirkaduhu way kuu iman lahaayeen.
Sababtaas awgeed, goobtan iskii u shaqaysta ayaa wali ah mid tartan ahaan hooseysa.
Xaqiiqo kale oo la yaab leh ayaa ah nidaamka mushaharka.
Loo -shaqeeyayaashu waxay bixiyaan 15% khidmad ah madasha, waxaadna ka heli doontaa $ 1,000 gunno saxeexan websaydhka haddii aad 500 saacadood u soo dirto macmiilka.
Miyaanay taasi la yaab ahayn? Saxiix hadda!
#15. Shaqaynta Aan shaqaynayn
Shaqaynta Aan Shaqaynin waa adeeg bilaash ah oo loogu talagalay fannaaniinta iyo naqshadeeyayaasha. Wax lacag ah kama qaadi doonto shaqaalaha madaxa -bannaan, taas oo lagu daray.
Gadaashiisa magaciisa la yaabka leh, goobtan ayaa u muuqata inay adeeg tayo sare leh siiso shaqaalaha madaxa bannaan.
Madalku wuxuu u furan yahay qof kasta laga bilaabo qorayaasha ilaa agaasimayaasha farshaxanka iyo animators. Dhammaan waa in, si kastaba ha ahaatee, ay u gudbaan jeeg ka hor inta aan loo oggolaan madasha.
Aniga shaqsi ahaan waxaan u isticmaalaa goobtan iskii u shaqaysta sababta oo ah waa qabow, fududahay in la isticmaalo, iyo tartan hooseeya. Websaydhku wuxuu u furan yahay qof kasta laga bilaabo qorayaasha ilaa agaasimayaasha farshaxanka iyo animators.
Hal -abuurayaasha, Shaqaynta Aan Shaqayn Gabi ahaanba waa bilaash. Shaqaalayaasha madaxa -bannaan lacag lagama qaadi doono.
Waxaan diyaarinay liis dhammaystiran oo ah goobaha xorta ah ee tartanka xorta ah ee ugu cusub (uguna kalsoonaan kara) adduunka iyo guddiyada shaqada ee internetka!
Tani waa qoraal loogu talagalay saaxiibadeena xorta ah ee bilaabaya hadda.
Haddii aad ku cusub tahay madaxbannaanida oo aad wali baratid xadhkaha, ka fogow aaladaha sida Fiverr iyo Upwork intii suurtogal ah.
Dhanka kale, tartanku waa mid aad u kulul, oo soo degitaanka mashruuc maadaama uu yahay qof cusub waa mid aad u adag.
Liiskani aad buu kuu anfici doonaa haddii aad tahay qof ku cusub xorriyadda raadinta si aad u heshid bandhig ama mashruuc si dhakhso ah, ama si fudud u -hawl -wade xor ah oo raadinaya goobo kale oo leh kharashyo hoose.
Tixgeli liiska oo arag waxa adiga kugu habboon.
freelancehacks.com - 21+ Goobaha Xorta ah ee Tartanka Hoose ee Cusub oo ay tahay inaad ku biirto 2022
freelancehacks.com -15+ Goobaha Freelancing-ka ee aadka loo yaqaan oo leh Tartan hoose 2022
11 Shabakadaha internetka oo aad wax ku qori karto isla markaasna lacag lagu siin karo
Sida Lacag Loogu Sameeyo Guriga Sida Ilmaha 2022 l 15 Siyaabaha Ugu Fiican
25 Shaqooyinka & Barnaamijyada Dhaqaalaha Gig ee ugu Fiican 2022 | Hagaha Bilowga
Dib-u-eegista Shaqada Qorayaasha 2022: Samee Illaa $ 30- $ 45/hr Qoritaan Aan Khibrad Lahayn
Faallooyinka GoodRx: GoodRx ma sharci baa | Waxyaabaha La Ogaado
Contena waa madal qoraal ah oo madax-bannaan ku salaysan oo xubin ka ah oo bixisa agab waxbarasho iyo shaqo raadis. Ujeedada…
13 Siyaabood Oo Lagu Helo Kabo Bilaash Ah Sida Adidas, Puma & Nike | 2022 Liiska
Kabaha waxaa loo sameeyay socodka, orodka, isboortiga, boodka, iyo dugsiyada. Fursadda lahaanshaha kabaha, badankood waxay qaataan…
30 Shaqaale oo Sharci ah oo ka yimid Shaqooyinka Guriga Shaqaalaysiinta hadda
Waxaan rabaa inaan ku siiyo 30 shaqo oo sharci ah oo ka imanaya shaqooyinka guriga hadda, dhammaan waa inaad sameysaa…
Dib u eegista Rev.com 2022: Sida ay u Shaqayso | Fadeexad ama Adeegga Qoraalka Sharciga ah
Waad ogtahay, ma jirto hab ka wanaagsan oo lagu ogaan karo faa'iidooyinka iyo khasaaraha alaabada haddii…